Indlu enendawo yokuphola engaselwandle etofotofo enepuli - I-Airbnb
Indlu enendawo yokuphola engaselwandle etofotofo enepuli
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOlga And Robert
UOlga And Robert yi-Superhost
I-Villa A11 a 950 sq. ft., igumbi lokulala eliyi-1/igumbi lokuhlambela eliyi-1 kumgangatho wesibini ojonge ipuli kunye neLos Perros point. Le ndlu ibalungele abantu abathandanayo okanye iintsapho ezincinci. I-Villa A11 inekhitshi elinento yonke, iiyunithi ze-A/C kwigumbi lokulala nakwindawo yokuhlala, i-TV, i-DVD player, i-wifi kunye nenkqubo yokubuyisela ibhetri. Sinikezela ngezaphulelo kwiinkonzo ze-spa kunye nokuqesha inqwelo yegalufa kubathengi bethu kwaye sinokwenza uhambo lokusefa kunye neentlanzi ukusuka endlwini.
Kwabo bangakwaziyo ukusefa, zininzi ezinye izinto ezonwabisayo, izinto onokuzenza nohambo losuku. Sinokulungiselela uhambo lokusefa ngesikhephe sohambo lokuloba ukusuka e-Iguana ukuba unokuqubha okanye uhambe ngesikhephe okanye uphume e-Gigante ukuba ukhetha ukulayisha isikhephe usuka elunxwemeni. Kukho ukunyuka intaba okumnandi kule ndawo ukuze uphume uze wonwabele iindawo ezintle, umoya ococekileyo, indalo kunye nokubuka izilwanyana zasendle. IHacienda Iguana inzima yayo yegalufu yemingxuma eyi-9. Umjikelo wegalufa (imingxunya eyi-18) kunye nenqwelo yegalufa kunye neeklabhu yi- $ 45 kuphela umntu ngamnye. NgoLwesithathu kukho igalufa yasemva kwemini elungiselelwe iindwendwe nabahlali. Ezinye izinto ezikhoyo kule ndawo ziquka ukuphulula izihlunu, i-yoga, uhambo lokutyibiliza ngesikhephe okanye iteksi, izifundo zokusefa, ukuloba, ukukhwela ihashe, i-snorkeling, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuqesha ngebhayisekile, ukuqesha ngeemophu, ukuqesha imoto, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuthutha kunye/okanye uhambo losuku ukuze ungcamle inkcubeko kwizixeko ezikufutshane okanye ukuya kutyelela iintaba-mlilo, amachibi e-crater kunye nezinye iindawo ezinomtsalane kumzantsi weNicaragua.
Inkampani yethu yokulawula ukuqeshisa, iGetnica, iseHacienda Iguana kwaye sikhona kwaye siyafumaneka kuyo nantoni na osenokuyidinga kunye nayiphi na ukuze sikuncede ngayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo. Sinikezela ngesikhokelo senkcazelo kwi-condo, esinenkcazelo ngezinto ezenziwayo, ukunyuka intaba, amacebiso ohambo losuku, iimephu, isikhokelo sevenkile yokutyela, iimenyu zeevenkile zokutyela zasekuhlaleni njl.
Kwintsapho yaseHacienda Iguana okwangoku kukho iivenkile zokutyela ezintlanu. Indawo yokutyela ekwiklabhu engaselwandle ineepleyiti ezisempilweni nezinencasa zesidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa kwaye inebhari entle yaselwandle eneeyure ezikhethekileyo zokonwaba. Ibhari kaDon Eloy kunye nevenkile yokutyela inesanti, amaphiko, ukutya kwebhari kunye nepitsa, inebhari epheleleyo kwaye ivulekele isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa. Le ikwayindawo entle yokubukela imidlalo. I-Scoops and Spedy yindawo yeengcali ze-ice cream, ikofu kunye nevenkile yePanini enendawo yokuqesha iibhayisekile kunye nokukhenketha. I-Vana tacos yivenkile entsha ye-taco evulekileyo ecaleni kwe-Scoops kwaye ivulekele isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kunye ne-veggie, inkukhu kunye ne-carne asada tacos kunye ne-burritos. ICasa Madera yivenkile yokutyela entsha enokutya kwaseNicaragua, evulekele isidlo sasemini nesangokuhlwa, kwaye ikwindlu yamaplanga empuma yegalufa. I-Don Eloys, i-Scoops kunye ne-Vana Tacos zonke zikwiziko lezentengiselwano elikhulayo lase-Iguana apho uza kufumana Ivenkile Yokusefa, Yima kunye neGo Surf Market (iivenkile zokutya), iSatori Spa kunye neVenkile yezipho. Ngoku kukho nendawo yokuhamba engabhatalelwayo (inqwelo yegalufa yabantu abayi-6) ejikeleza iindlela zangaphakathi zaseHacienda Iguana emini ezikhwela simahla iindwendwe. Le yindlela entle yokufikelela kwiindawo zokusefa, iklabhu engaselwandle, ivenkile yokutyela kunye nebhari, iGolf Pro Shop kunye/okanye iIguana 's commercial Centre.
Umbuki zindwendwe ngu- Olga And Robert
Sihlala eHacienda Iguana kwaye siyafumaneka ukuba unemibuzo okanye ufuna uncedo.